Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Ihe ruru mmadụ 100 na-atụ ụjọ na ha tọrọ atọ na apịtị apịtị ndị Canada
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ihe ruru mmadụ 100 na-atụ ụjọ na ọ tọrọ atọ n'ala Canada.
Ndị ọrụ nnapụta ihe mberede kwuru na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala iri ise dabara n'etiti ogige irighiri ihe abụọ n'okporo ụzọ awara awara, yana ihe dị ka mmadụ abụọ ruo atọ n'ime nke ọ bụla.
Mbibi ahụ dị na British Columbia nke Canada sochiri ihe karịrị otu ụbọchị nke oke mmiri ozuzo.
Ndị ọrụ nyocha na nnapụta ka na-anwa ịchọpụta ihe mebiri site na oke ala ahụ na Mọnde.
Ndị ọrụ gọọmentị amabeghị ma enwere ndị mmadụ na ụgbọ ala ndị ọzọ na-efu efu.
Oke mbuze dara n'okporo ụzọ awara awara 7 dịdebere obere obodo Agassiz dị na ndịda Canada British Columbia mpaghara, na-esochi ihe karịrị otu ụbọchị oke mmiri ozuzo.
Ọ dịkarịa ala, a na-atụ egwu mmadụ 100 ka ha tọgbọrọ n'otu abalị n'etiti mkpọmkpọ ebe n'okporo ụzọ awara awara Canada mgbe mmiri ozuzo na-akwụsịghị akwụsị kpalitere idei mmiri na apịtị ụnyahụ. Mgbalị nnapụta ga-amalite mgbe chi bọrọ.
Dị ka ndị ọrụ nnapụta ihe mberede Canada si kwuo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala 50 tọgbọrọ n'etiti ogige irighiri ihe abụọ n'okporo ụzọ awara awara. British Columbia, nke nwere ihe dị ka mmadụ abụọ ruo atọ n'ime nke ọ bụla.
Ndị ọrụ nyocha na nnapụta ka na-anwa ịchọpụta ihe mebiri site na mkpọda ahụ na Mọnde - yana mpaghara mpaghara Ọchụchọ na nnapụta dị n'obodo ukwu (HUSAR) ndị ọrụ na-ekpughe na ha enwebeghị ike ịhụ ọnọdụ ahụ zuru oke n'otu abalị.
"Ihe na-agbagha ọnọdụ a bụ na anyị nwere slide abụọ na Highway 7 ma anyị nwere ndị tọrọ atọ na irighiri ihe… na ụfọdụ a napụtara," Onye isi otu HUSAR David Boone kwuru.
Ọ gbakwụnyere na ngalaba mgbanyụ ọkụ nke obodo ahụ ewepụtala opekata mpe mmadụ iri na abụọ tọrọ n'ụgbọ ala ha, ebe a napụtara mmadụ abụọ ọzọ ebe ọzọ.
N'ịkọwa na ndị ọrụ amabeghị ma enwere ndị mmadụ na ụgbọ ala ndị ọzọ na-efu efu, Boone kwuru na ndị ọchịchị “ka kpuru isi n'ụzọ zuru oke nke nsogbu a.” Na mgbakwunye na enweghị ọkụ, nkwụsi ike nke ala na okwu ndị dị n'akụkụ eriri ọkụ na-akpaghasịkwa mbọ nnapụta. Ntụle ndị ọzọ gbasara "ebe kacha mma ịnweta" maka otu ahụ ga-echere ruo mgbe chi bọrọ, ọ gbakwụnyere.
Dị ka ụfọdụ akụkọ ekwentị sitere n'aka ndị ọkwọ ụgbọ ala si kwuo, ha nwere ike "nụrụ n'ezie ka a na-eti mkpu na iti mkpu maka enyemaka," na-atụ aro na e nwere "ikekwe ihe dị ka ụgbọ ala 200 dọtara, na-eche ụdị mmelite."